Madaxweynaha Kenya oo lagu cadaadinaayo in xilka uu ka xayuubiyo Wasiirka Arrimaha Gudaha - iftineducation.com
Madaxweynaha Kenya oo lagu cadaadinaayo in xilka uu ka xayuubiyo Wasiirka Arrimaha Gudaha
iftineducation.com – Warbaahinta dalka Kenya, ayaa waxay maanta si weyn wax uga qoreysaa arrinta ku aadan, in Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta lagu cadaadinaayo in uu xilka ka xayuubiyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ahna Amniga Joseph Ole Lenku.
Arrintaan, ayaa waxaa barbar socoto cadaadis kale oo Madaxweynaha lagu saaraayo in shaqada uu ka rusqeeyo Taliyaha Ciidanka Booliska Kenya General David Kimaiyo.
Sida ay qoreyso Warbaahinta Kenya, ayaa waxaa arrintaan Madaxweynaha ku cadaadinaaya Xisbiyada Mucaaradka iyo xubno ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka ee Kenya.
Axsaabta Mucaaradka, ayaa waxay dalbanayaan in xilka laga xayuubiyo labadaasi masuul, haddii uu sii xumaanaayo amnigii dalka Kenya, ayna u arkaan mid u baahan in is bedel deg deg ah lagu sameeyo.
Dadka reer Kenya, ayaa waxay si weyn uga careysan yihiin tallaabadii sida gaarka ahayd loogu isir soocay dadkii Masiixiyiinta ahaa, ee lagu laayay duleedka Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari, bishii hore ee November.
Culeyska la saaraayo Madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa, xilli Shabaabku ay ku cago jugleynayaan in weeraro hor leh ay ka geysanayaan dalkaasi Kenya.
Dhagayso:- Puntland shirka Somalia iyo Somaliland Natijada kasobaxday ma aqonsandona
Nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu dilay Saxaraha dalka Masar